a - TECHNOMANIAC's - BLOG: Oh My 2nd Year Life !
Oh My 2nd Year Life !
ကျောင်းပြန်ဖွင့်ပြီဗျ။ ကျောင်းပိတ်ရက် ၁ လ လုံးလည်း အလုပ်တွေရှုပ်၊ ဟိုဟာလုပ် ဒီဟာလုပ်နှင့် လူလည်း စက္ကူလုံးဖြစ်နေပြီ။ ( ပွယောင်းယောင်း ဖောသွတ်သွတ် ဟိုလှိမ့်ဒီတိုက် ဖြစ်နေတာကိုပြောတာပါ။ ) တနင်္လာနေ့ က ကျွန်တော်ကျောင်းပြန်တက်ရပါတယ်။ လူက ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားဆိုတော့ ဖရက်ရှာလေးတွေကြားထဲမှာ မြောက်ကြွမြောက်ကြွနှင့် အဟုတ်ပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် အပျော်လေးက သိပ်မခံလိုက်ပါဘူး။ ၂ ရက်ပဲကြာတယ်။ သင်ရမဲ့ ဘာသာရပ်တွေရဲ့ အိုဗာဗျူးတွေ လည်း ဖတ်ပြီးရော လူလည်းသေချင်စော်နံပါလေရော။ ကြည့်လေ။ ယူထားတာက ဒစ်ပလိုမာ အင် အိုင်တီ တဲ့။ သင်ရမဲ့ဟာတွေက ဥပဒေ ( တကယ့် ဥပဒေ စစ်စစ်၊ ရှေ့နေကိုယ်တိုင်သင်မှာ ) ဘာသာက တစ်ခု။ စီးပွားရေးပညာဆိုပြီး စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု က ၁ ဘာသာ။ ဈေးကွက်နားလည်အောင်ဆိုပြီး ဈေးကွက်စနစ်၊ မားကက်တင်း က ၁မျိုး။ အခုခေတ်စားနေတဲ့ အီးကောမားစ်လို့ခေါ်တဲ့ အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေး ဘာသာက လည်း ၁ ဘာသာ။ ကြည့်စမ်းပါဦး ။ နန်း-အိုင်တီ ၊ ဘာသာရပ်တွေကြီးပဲ။ ဗဟုသုတ တော့ရတာပေါ့ဗျာ။ လူလည်း အသိဥာဏ်တက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အရမ်းများ များလွန်းနေလားမသိဘူး။ နောက်ဆုံး ဂျနရယ်လစ် မဖြစ်ပဲ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ခပ်သွတ်သွတ်ဖြစ်သွားလို့ကတော့၊ အဟင့်။ သေပြီဆရာပဲ။
တခြားကွန်ပြူတာဘာသာရပ်တွေကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဆက်သွယ်မှု၊ ကွန်ယက်နည်းပညာ၊ ၀ဗ်လုံခြုံရေးနှင့် ဆားဗစ်တွေအကြောင်း၊ တစ်ချို့ဟာတွေက ဂရစ်ကွန်ပြူတင်းရဲ့ အခြေခံတွေလည်းပါတယ်။ နောက်ဝဗ်အပလီကေးရှင်းတွေ တည်ဆောက်တာတွေရောပေါ့။ ကြိုးစားရဦးမယ်။ ဒီတစ်နှစ်လည်း ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ခေါက်ကတော့ ဒါရိုက်တာရိုးလ် လွတ်သွားတယ်။ ဆုမရတော့ဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ လာလေရော့ဆိုပြီး ကြုံးဝါးထားတယ်။ အဟီး အပြောသာရှိတာပါ။ စာကမလုပ်ဖြစ်ဘူး။
ကျွန်တော့်ကို ခုတလောနှိပ်စက်နေတဲ့ ကောင်မလေး ၁ယောက်ရှိတယ်။ ရုပ်ဆိုးဆိုး၊ မျက်လုံးပြူးပြူး၊ အသားမည်းမည်း၊ ဆံပင်ရှည်ရှည် သူ့ကိုယ်သူ စုန်းမလို့ ကင်ပွန်းတပ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ခိုင်းသမျှ အကုန်လုပ်ပေးနေရတယ် ဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို သူက သရဲလေး ဆိုပဲ။ နာမည်နှင့် နှိမ်ပြီးခိုင်းတယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့။ စုန်းကဝေ ဒုတ်ကို ဖိုးတစ္ဆေ ကျုပ်က ကြောက်ရတယ် ဆိုတော့ အကျိုးအမြန်မယုတ်ရလေအောင် ခိုင်းတာမြန်မြန်လုပ်ပေးလိုက်တာ ကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့ ကွယ်ရို့။
ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၂၀၀၆
Posted by Wai Phyo at10:50 PM
Oh my Psycho.... !
Healthy Life ?
IT Guys: Bachelors-gonnabes!
Songs Revealing Inner Heart